अर्थ संसार: भारतीय कर्मचारी आएमात्र पनि महत्व दिने हाम्रो नीतिले हेपिएका छौ
भारतीय कर्मचारी आएमात्र पनि महत्व दिने हाम्रो नीतिले हेपिएका छौ
नयाँ सरकार गठन हुनासाथ पहिला भारतको भ्रमण्ा गनर्े परम्परालार्इ वर्तमान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि निरन्तरता दिएका छन्‍ । नेपाल भारतवीच åीपक्ष्ाीय दर्जनौ मुद्दा थाती रहेपनि प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको भ्रमण्ामा यसबारे कुरा उठ्‍ने गर्छ तर निकास भने निस्कने गरेको छैन । यसको कारण्ा के हो ? यी लगायत नेपालको कुटनीतिबारे पूर्व भारतीय राजदुत तथा कुटनीतिज्ञ डा. भेष्ाबहादुर थापासँग गरेको कुराकानी :
अहिले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमण्ालार्इ कसरी हेनर्ुभएको छ ?
हामी अहिले संत्रmमण्ाकालिन अवस्थामा छौं । सानोतिनो सहमति गर्न समेत राजनीतिक दलबीच सहमती जुटाउनुपनर्े अवस्थामा छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमण्ामा त्यस्तो ठूला सन्धि सम्भmौता गर्न सक्नुहुन्न । यो भ्रमण्ालार्इ दुइ देशबीच सम्बन्ध बढाउने सद्‍भावना भ्रमण्ाको रुपमा मात्र लिनुपर्छ । भनेपछि उपलब्धिको हिसाबले यो भ्रमण्ाको कुनै अर्थ छैन, होइन त ? त्यसो होइन । नयाँ कुरा उठाउन आवश्यक छैन मात्र भनेको हो । यसअघि उठेका थुप्रै मुद्दाहरू किनारा लगाउन सकिएको छैन । १९५० मा सन्धि भएदेखि नै त्यसबारे प्रश्नचिह्न रहेको छ । त्यसपछि भएको वाण्ािज्य सन्धि नवीकरण्ा गर्दा धेरै अंकुश लगाइँदा नेपाललार्इ धेरै घाटा लागेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमण्ामा यो नवीकरण्ा हुन सके नेपालले बढी फाइदा लिन सक्छ । तर यो सरकारले दीर्घकालीन महत्वको मुद्दामा प्रवेश गर्‍यो भने यसले नयाँ विवाद जन्माउन सक्छ । यो कुरालार्इ प्रधानमन्त्रीले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । प्रमको भ्रमण्ा अगावै विधिन्न दलले चेतावनीको भाष्ाामा सन्धि सम्भmौता नगर्न त भनेका छन्‍ नि ।
प्रधानमन्त्रीको पञ्चेश्वर परियोजनामा सहमति गनर्े इच्छा भएपनि यसको विरोध हुनुलार्इ कसरी हेनर्ुहुन्छ ?
अहिले पारदर्शी रुपमा यस परियोजनाबारे छलफल र विचारविमर्श नभएकाले यसले विवादको रुप लिएको हो । सबैलार्इ चित्तबुभm्‍ने गरी सहमति गरेपछि मात्र परियोजना अगाडि बढाउनुपर्दछ । मुख्य कुरा बाँडफाँटको हो । कसैलार्इ ठगिएको महसुस नहुनेगरी यसको फाइदा बाँडफाँट हुनुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिमा भारत हाबी हुँदै आएको छ, किन यसो हुन्छ ?
नेपालमा शान्ति बहाली होस्‍ भनेर भारतले मात्र होइन, समग्र विश्वले नै चाहेको छ । तर, खुला सिमाना, हाम्रो धार्मीक, साँस्क ृतिक निकटता भारतसँग बढी भएको कारण्ाले गर्दा भारतले बढी भूमिका खेल्यो होला । तर मुख्य कुरा चाहिँ त्यो भूमिका खेल्न हामीले पनि स्थान दियाँै । हाम्रा पार्टीहरुले सहयोग खोजेकै कारण्ा भारत शान्ति प्रत्रिmयामा सहभागी भएको हो । गिरिजाबाबुदेखि प्रचण्ड दिल्ली जानुभएकै हो । बाह बुँदे समभmदारी समेत दिल्लीमा नै भएको हो । अहिलेको मुख्य रुपमा हामी 'फोकस' हुने भनेको नेपालमा अपराधिक गतीविधि गनर्े ब्यत्तmिको भारतमा संरक्ष्ाण्ा नहोस्‍ भन्ने नै हो ।
नेपाल र भारतको कुटनीतिमा सन्तुलन नै नभएको भन्ने पनि छ ?
मुख्य कुरा हाम्रा राजनीतिक पार्टीमा नै कमजोरी छ । देशका स(साना समस्या पनि देशभित्र समाधान गनर्ुको साटो बाहिरी सहयोग खोज्ने गरिन्छ । पार्टीपार्टीबीचको मतभेद पनि भित्रै निराकरण्ा गर्नको सट्टा भारत लैजाने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा हाम्रो विदेश नीतिमा धमिलोपन आएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालपछि कुनै प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण्ा भएको छैन । अटल विहारी बाजपेयीको भ्रमण्ा भए पनि त्यो सार्क सम्मेलनका लागि मात्र हो । तर नेपालका प्रत्येक प्रधानमन्त्री भारतको भ्रमण्ामा पुगेका छन्‍ । नेपालका राजनीतिक नेता भारतको साथसमर्थनबिना केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने मानसीकतामा छन्‍ । एउटा राजदुत या कर्मचारी आएमात्र पनि चित्त बुभmाउने हाम्रो नीतिले हामी केही हेपिएका छौँ । यसले गर्दा केही कुटनीतिक असमानता देखिन्छ ।
नेपालका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको भ्रमण्ामा सन्‍ १९५० को सन्धीबारे कुरा उठ्‍ने गरेको छ, तर कुनै सुधार हुन सकेको छैन ?
यो गम्भीर विष्ाय हो । सुरुमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले यो सन्धी पुनरावलोकनको कुरा उठाएका थिए । म राजदुत हुँदा पनि सन्धी पुनरावोलकन गनर्े प्रयास भएको थियो तर हुन सकेन । १९५० को सन्धीले नेपालीले आफू हेपिएको महशुस गरेका छन्‍ । नेपालीको यो भावना भारतलार्इ पनि राम्रसँग थाहा छ । तर नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नहुँदा नेपालीको भावनामा भारतले खेल्ने मौका पाएको हो । तर अहिलेको भ्रमण्ामा यो सन्धीबारे कुरा उठ्‍दैन होला । मलार्इ लाग्छ यो सरकारले नयाँ संविधान नीर्माण्ामा ध्यान दिने हो । यो गम्भीर राजनीतिक मुद्दा भएको कारण्ाले गर्दा नयाँ संविधानपछि निर्वाचित भएर आउने सरकारले मात्र यसवारेमा कुरा उठाउन सक्छ ।
पुनरावलोकन होइन यो सन्धी खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि बलियो रुपमा उठिरहेको छ ?
भारतीय वीदेश सचिव नेपाल आएकै बेलामा 'सन्धि चित्त बुभmेको छैन भने खारेज गर' भन्ने धम्कीपूर्ण्ा रुपले बोलेका थिए । तर त्यो सन्धीको रिक्तताको परिण्ाामबारे कसैले विचार पुर्‍याएका छैनन्‍ । दुवै देशको स्वतन्त्रता र समानताको भावनाअनुसार नयाँ सन्धि गनर्ुपर्छ । यसअघि पनि नेपालले भारतसँग मैत्री सन्धि प्रस्तावित गरेको थियो । तर यसबारे न कुनै छलफल भयो न प्रकाशमा नै आयो । मैत्री सन्धिका लागि हामीले भारतलार्इ मनाउनुपर्छ । पञ्चशिलका आधारमा सन्धि गनर्ुपर्दछ । नत्र दुर्इ ठूला देशबीच निहुँ खोजेर कुहिनाले पहाडमा हिर्काएजस्तै हो । सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्‍नुपर्दछ ।
नेपाललार्इ भारत र चीनले आफूतफ आकष्ाित गनर्े प्रयास भइरहेको छ नि ?
चीनसँग नयाँ सन्धिको कुरा अगाडि बढाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चिन जान लागेको बेला सरकार परिवर्तन भयो । चीन र नेपालको सम्बन्ध र मैत्री सम्बन्धबारे भारतले कसरी हेर्‍यो, त्यसले नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो त्यो त छर्लङ्‍गै छ । एसीयामा नै भारत र चीनले धेरै आर्थिक प्रगति गरिसकेका छन्‍ । हामीले पनि यी देशको आर्थिक प्रगतिबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ । यी दुर्इ देशको सुरक्ष्ाित पाटो भनेको नेपाल हो । त्यसैले दुवै देश एकअर्काविरु चलखेल नहोस् भन्ने चाहन्छन्‍ । यो अवस्थालाइ सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्‍नुपर्छ । तर नेपालसँग अहिले छिमेकी देशसँग कस्तो ब्यवहार गनर् भन्ने विदेश नीति नभएकाले हामीलाइ अप्ठेरो परेको हो ।
त्योसोभए हामी एकअर्कालार्इ चिढ्‍याउने दिशातफ त गइरहेका छैनौं ?
यो अवस्थामा हामीले हाम्रो आन्तरिक स्थितिलार्इ बलियो बनाउनुपर्दछ । स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व भनेकै भू(भाग, नागरिकता र प्राक ृतिक साधन हो । नागरिकता जसले पनि लिन पाउने, प्राक ृतिक स्रोतबाट अरुले फाइदा उठाउने परिस्थितिको सिर्जना भयोभने देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ ।
Posted by Yadav Humagain at 5:41 AM